GOLAHA AMMAANKA OO KA SHIRAYA XAALADA DALKA SOOMAALIYA – Radio Daljir
Febraayo 22, 2021 11:42 b 0
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta dood adag ka yeelanaya xaalada siyaasadeed ee dalka Soomaaliya.
Kulankan ayaa lagu wadaa in sidoo kale loogaga hadlo arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, Doorashooyinka, Siyaasadda iyo waqti kordhinta ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM.
Fadhigan ayaa waxaa uu ku soo beegmayaa iyadoo xaalad xasaasi ah oo dhinaca siyaasada ay ka jirto dalka Soomaaliya.
Midowga Musharaxiinta ayaa waxa ay qoraal u gudbiyeen golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay oo ay kaga canayaan madaxda DFS.
Golaha Ammaanka ayaa fadhi uu yeeshay 9-kii Febaarayo 2021 ayaa dhageystay xogta Soomaaliya, waxaana warbixinta la wadaagay Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada